Broken Archives — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
jajabay jajabay jajabay jajabay jajabay jajabay jajabay jajabay jajabay jajabay jajabay jajabay jajabay jajabay
Yaan ahay? Part 1: Beautiful Laakiin jajabay
video Tani waa ka a shir xerta Haddaba Batesville, MS. Fadlan cafi ka video iyo tayada maqal ah
weekend Tani waxaan u socoto si ay uga hadlaan aqoonsiga. Taasi waxa ay hoggaamiyeyaasha aad i weydiiyay in ay ka hadlaan, laakiin waxa iyagu ma ay ogayn waa in this horay u ahaa wax uu ku qalbigayga iyo in waxaan ka fikirayay ku saabsan. Waxaan la hadlay oo ku saabsan kooxda dhalinyarada ah ee aan kaniisadda ee D.C. qayb ilaa xad ah.
Haddaba maxaad ayaa aqoonsi ku qalbigayga? Maxaad Waxaan qabaa inay tahay mid aad muhiim u ah in la ogaado qofka aad tahay? Maxaa yeelay, haddii aadan aqoon aad qofka aad tahay, aadan aqoon sida aad u malaynayeen in ay ku noolaadaan.
Ka fikir Bourne Aqoonsiga The. Ninkan tooso Doonta oo garan maayo cid uu yahay. Waxa uu helaa fikrad ah iyo aado Switzerland. Waxa uu helo in dagaal iyo ogaaday in uu u tababaran ee la dagaalanka. Ma rabtaa ma noqon waalan haddii aad kala sooc lahayn ogaaday aad xirfadaha qarsoodi ah Ninja? Waayo, inta kale ee filimka uu Safar ah in la ogaado cida uu yahay. Waxa uu awood u wax ma uu xitaa ogeyn oo ku saabsan. Laakiin hadii uusan iyada u aqoonsanno, isagu ma uu awoodi doonaan in ay ku noolaadaan sida…